Vaovao - Takelaka akrilika
Araka ny fanadihadiana nataon'ny MRFR, ny Global Acrylic Sheets Sheets dia vinavinaina hanoratra CAGR mihoatra ny 5,5% hahatratra ny sandan'ny $ 6 Miliara amin'ny 2027.
Ny akrilika dia fitaovana plastika mangarahara miaraka amin'ny tanjaka, hamafin'ny fahitana ary mazava mazava amin'ny optika. Mora ny mametaka azy, mametaka tsara amin'ny adhesives sy solvents, ary mora thermoform. Ny fananana dia manana toetran'ny toetrandro ambony raha oharina amin'ny plastika mangarahara maro hafa.
Ny takelaka akrilika dia mampiseho toetra toy ny fitaratra toy ny mazava, famirapiratana ary ny mangarahara. Maivana izy io ary misy fanoherana mahery vaika kokoa raha ampitahaina amin'ny vera. Ny takelaka akrilika dia fantatra amin'ny anarana maro toy ny acrylic, vera akrilika, ary plexiglass.
Ny tsenan'ny akrilika manerantany dia entin'ny fampiasana azy amin'ny indostrian'ny fananganana sy ny fananganana ho an'ny fampiharana isan-karazany toy ny tetikasa fanatsarana trano, backsplash ao an-dakozia, varavarankely, fizarana rindrina ary fanaka an-trano sy haingon-trano, ankoatry ny hafa. Ny takelaka akrilika no safidy tsara indrindra amin'ny fitaovana noho ny fananana ambony toa ny mazava tsara optika, ny fanoherana 17 heny raha oharina amin'ny vera, maivana, mari-pana ary fanoherana simika.
Ho fanampin'izany, izy io dia be mpampiasa amin'ny glazing ara-barotra sy ara-drafitra mba hamoronana windows sy toetr'andro mahatohitra ny tafio-drivotra, varavarankely lehibe sy tsy misy bala ary hazavana maharitra.
Ireo mpilalao miasa amin'ity tsena ity dia mifantoka amin'ny tetikady stratejika isan-karazany toy ny fanitarana sy ny fanombohana ny vokatra. Ohatra, tamin'ny volana aprily 2020, dia nampitombo ny famokarana ravina akrilika mangarahara tamin'ny 300% hanohanana ny fanamboarana ny rindrina fiarovana ny fahadiovana any Angletera sy ireo firenena eropeana hafa ho valin'ny fitomboan'ny fangatahana miaro amin'ny aretin'ny COVID-19.
ASTM D4802 dia mamaritra ny torolàlana momba ny famokarana takelaka acrylic amin'ny alàlan'ny fizotrany samihafa. Na izany aza, ny akora akrilika dia misy aketo vinitra na methyl acrylate, izay fibre synthetic vita amin'ny polymer (polyacrylonitrile). Ny lalàna mifehy ny loza ara-pahasalamana sy ny tontolo iainana amin'ireny akora ireny dia misy fiantraikany amin'ny famokarana sy fampiasana takelaka akrilika.
•Takelaka akrilika tafaporitsaka: Ireo takelaka ireo dia ambany noho ny kalitao raha oharina amin'ny lambam-pandriana akrilika, saingy misy fanoherana telo heny mahery noho ny ankamaroan'ny fitaratra varavarankely mahery nefa milanja antsasaky ny farafaharatsiny. Izy ireo dia miasa tsara amin'ny fisehosehoana, jiro, signage ary fandrafetana, ary koa fampiharana hafa maro. Ny lambam-pandriana dia mety loko miloko na kristaly mamirapiratra, miankina amin'ny filàna, ary ho lasa mavo na halazo rehefa mandeha ny fotoana.
•Cast Acrylic Sheet: Cast acrylic dia maivana, mahazaka fiantraikany ary maharitra taratasy. Izy io dia azo amboarina mora foana amin'ny endrika irina rehetra, misy loko, habe, hateviny ary famaranana maro samy hafa, ary mety tsara amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny tranga miseho ka hatrany am-baravarankely. Ny fizarana dia mizara ho sela acrylic cell cast ary ravina acrylic cast hatrany.